Kalifornia - Fandotoan'ny maloto | Fiaretana haran-dranomasina
Kalifornia - Fandotoan'ny maloto
Famenoana rano anaty rano any amin'ny County County
Orange County, California dia faritra an-tanàn-dehibe izay miorina eo amoron'ny Ranomasimbe Pasifika, atsimon'ny faritanin'i Los Angeles. Miaraka amin'ny isam-ponina misy olona 3 tapitrisa hatramin'ny 2010, dia faritany fahatelo be mponina indrindra ao Kalifornia.
Ny Distrikan'ny Rano Orange County (OCWD) dia fantatra tamin'ny nanorenany, tamin'ny 1976, ny iray amin'ireo fotodrafitrasa voalohany tany Etazonia tamin'ny fanovana ny rano maloto ho rano voadio. Ity tetik'asa voalohany ity, antsoina hoe Water Factory 21, dia nametraka ny fototry ny fanitarana tamin'ny taona 2008 ho ao amin'ny rafitra fanadiovana rano lehibe indrindra manerantany ho an'ny fampiasana azo ampiasaina. Na dia tsy noheverina ho fahasalamana an-dranomasina aza ilay tetikasa tamin'ny voalohany, dia namonjy rano amina miliara amina tapitrisa litatra tsy halefa any anaty ranomasina, sady manome rano madio ho an'ny olona ana hetsiny any amin'ny faritra misy haintany.
Tamin'ny tapaky ny taona 1970, taorian'ny nahazoana boom-bahoaka sy ny fitomboan'ny tinady rano, dia nidina ny rano anaty rano ambanin'ny tany County County. Ny ranon-tsiranoka avy any amin'ny ranomasina dia mitanjozotra mankany anaty tanety, mitera-doza ho an'ny famatsian-drano fisotro ao amin'ny distrika. Ny mpitondra OCWD dia nanapa-kevitra ny hanangana zavamaniry afaka manadio ny rano maloto ao amin'ny distrika mba hahafahan'ny OCWD mampiditra ny rano voadio hiverina ao anaty anaty rano, izay niasa ho sakana ary nanakanana ny fidiran'ny rano masira.
Ilay fotodrafitrasa, fantatra amin'ny anarana hoe Water Factory 21, dia afaka namokatra rano madio manodidina ny 15 tapitrisa litatra isan'andro. Rehefa nihalehibe ny isam-pokontany, ary nihabetsaka ny rano nesorina tamin'ny anaty rano ambanin'ny tany, mbola olana ny fidiran'ny rano masira. Fahita koa ny haintany, ka niteraka tsy fahampian-drano matetika. Tamin'izany fotoana izany, ny famatsian-drano an'ny distrika dia avy amin'ny rano ambanin'ny tany, ny reniranon'i Santa Ana, ary nafarana ihany koa tamin'ny vidiny lehibe avy amin'ny renirano Colorado sy avy any avaratr'i Kalifornia. Ny fampidirana rano bebe kokoa dia tsy dia azo atokisana mandritra ny main-tany.
Ny olana iray hafa atrehin'ilay kaomina dia ny fantsom-pivoarana lehibe iray, izay nandefa rano maloto voadio avy amin'ny toeram-pitsaboana nivoaka tany amin'ny ranomasina, dia nahatratra ny fahaizany. Raha nitarina ny loharanon'ny rano mifanaraka amin'ny tinady, tsy ho zakan'ny fantsona ny habetsany fanampiny.
Ny mpitarika OCWD dia nandanjalanja ny drafitra fanitarana samihafa, nitady ny safidy mora vidy indrindra izay hampiakatra ny famatsian-drano na dia mandritra ny hain-tany aza, amin'ny farany dia mamorona ny tetik'asa momba ny rafitra fananganana ny tany (GWRS). Ao anatin'io drafitra io, ny OCWD dia niara-niasa tamin'ny Distrikan'ny Sanitation Orange County (OCSD) hananganana ny rafitra fanadiovana rano lehibe indrindra manerantany ho an'ny fampiasana azo ampiasaina.
Ny fotodrafitrasa namboarin'ny OCWD sy OCSD dia niasa tamin'ny 2008 ary afaka namokatra rano madio 70 tapitrisa litatra isan'andro. Tamin'ny 2015, nitarina ilay zavamaniry hamokatra 100 tapitrisa litatra isan'andro, ary ilay zavamaniry dia eo am-panaovana fanitarana hafa izay hamokatra 130 tapitrisa galona isan'andro amin'ny 2023.
Alohan'ny handehanana any amin'ilay orinasa fanadiovana, ny rano maloto dia mizaka ny fomba fitsaboana mahazatra kokoa antsoina hoe fitsaboana faharoa, izay misy ny efijery fisotroana, ny efitranon'ny grit, ny sivana mivezivezy, ny fivoahana ao anaty rano ary ny famonoana otrikaretina. Rehefa vita io dingana io dia alefa any amin'ny orinasa GWRS. Namboarin'ny orinasa injeniera CDM Smith, ilay orinasa dia mampiasa dingana fanadiovana telo dingana.
1 - Ny dingana voalohany dia microfiltration, izay miankina amin'ny kofehy poakaty polypropylene bitika, mitovy amin'ny mololo, misy lavaka kely amin'ny sisiny izay 0.2 micron ny savaivony (1/300 ny savaivon'ny volon'olombelona). Amin'ny alàlan'ny fisarihana rano amin'ireo lavaka mankamin'ny afovoan'ny kofehy, dia soloina avy ao anaty rano ny solido sy pathogen mihantona.
Ny mikrofiltration dia misy ny fampiasana kofehy poakaty polypropylene bitika, mitovy amin'ny mololo, misy lavaka amin'ny sisiny izay 0.2 micron ny savaivony (1/300 ny savaivon'ny volon'olombelona). Amin'ny alàlan'ny fisarihana rano amin'ireo lavaka mankamin'ny afovoan'ny kofehy, dia soloina avy ao anaty rano ny solido sy pathogen mihantona. Sary © Distrikan'ny rano County Orange
2 - Mandritra ny dingana faharoa dia miatrika osmosis miverimberina ny rano, izay terena amin'ny alàlan'ny membrane manify izay manala ny otrikaretina sy ny simika, anisan'izany ny fanafody.
Aorian'ny fitrandrahana microfiltration dia miverina osmosis miverimberina ny rano, izay terena amin'ny alàlan'ny membrane manify izay manala ny otrikaretina sy simika, anisan'izany ny fanafody. Sary © Distrikan'ny rano County Orange
3 - Ny dingana fahatelo dia misy ny fitsaboana farany amin'ny hazavana ultraviolet, izay mamono otrikaretina ny rano amin'ny alàlan'ny fandikana ny ADN misy pathogen sisa tavela; hydrogène peroxyde koa dia ampiasaina hanalana vy, tannins ary organika mavesatra ambany amin'ny molekiola amin'ny alàlan'ny fizotran'ny oksidana mandroso, izay manapaka ny fatoran'ny molekiola sisa tavela. Ny menaka mineraly dia ampidirina ao anaty rano indray mba hiaro azy ary hampiorina ny pH, alohan'ny hidirana amin'ny rafitra fizarana.
Ny fitsaboana farany amin'ny hazavana ultraviolet dia mamono ny rano amin'ny alàlan'ny fandikana ny ADN misy ny otrikaretina sisa tavela; ary ny hidrozenina peroxyde koa dia ampiasaina hanalana vy, tannins ary organika mavesatra ambany amin'ny molekiola amin'ny alàlan'ny fizotran'ny oksidana mandroso, izay manapaka ny fatoran'ny molekiola sisa tavela. Sary © Distrikan'ny rano County Orange
Ny rano tsaboin'ny GWRS dia mihoatra ny lalàna mifehy ny fanjakana sy ny federaly amin'ny fisotroana rano. (Raha mila tsipiriany misimisy momba ny injeniera, jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsidihana ara-teknikan'ny rafitra fanarenana rano ambanin'ny tany.) Ny rano voadio, ny rano ambanin'ny tany ary ny rano amboniny dia iharan'ny fanaraha-maso betsaka ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLaboratoara kalitaon'ny rano Philip L. Anthony, izay itsapana ny fitambarana mihoatra ny 500 (ny EPA ihany no mifehy 90, ka mamela zavatra simika an'arivony tsy voafehy). Ny laboratoara dia manandrana rano avy amin'ny toerana 1,500 eo ho eo manerana ny tavy, mamakafaka santionany maherin'ny 20,000 isan-taona ary mitatitra valiny maherin'ny 400,000. OCWD koa dia manome fitsapana isam-paritry ny lavadrano fisotro 200 mahery ho an'ireo mpamatsy rano fisotro eo an-toerana.
Aorian'ny fitsaboana, ny ampahatelon'ny volavola vokarina dia atsofoka ao anaty lavadrano lalina manamorona ny morontsiraka, izay manamboatra sakana amin'ny rano velona amin'ny fidiran'ny rano, ary ny ambiny kosa dia ampiasaina hanampiana ny famenoana ny Loharanon'ny Tany ambanin'ny Tany any County County. Mitranga izany amin'ny famelana ny rano hisoka anaty dobo lehibe ary avy eo mivezivezy amin'ny alàlan'ny fasika sy vatokely amin'ny alàlan'ny hery misintona ho fitahirizana anaty rano anaty rano ambanin'ny tany. Na dia afaka manome filtration fanampiny aza ny fizotran'ny percolation, amin'ny tranga OCWD dia efa nodiovina hatrany amin'ny haavon'ny distillation ny rano, ary ity dingana ity dia natao ho an'ny fiarovana fanampiny ampanaovin'ny mpandamina rano fisotro any California. Izany dia manome tombony ara-psikolojika ihany koa, manampy amin'ny fampihenana ny tsy fankasitrahan'ny mpanjifa ny fampiasana rano voaverina hanampiana ireo loharano fisotro nentim-paharazana. Ireo mpivarotra antsinjarany dia manala ny rano amin'ny tavy amin'ny loharano 400 mahery ary manaparitaka izany amin'ny mpanjifa.
Ny programa amin'izao fotoana izao dia mamatsy galona 100 tapitrisa isan'andro, izay rano ampy hanomezana izay ilain'ny olona 850,000. Ny fantsakan'ny rano ambanin'ny tany any County County dia manome 77% ny totalin'ny famatsian-drano ho an'ny olona 2.5 tapitrisa monina amin'ny avaratra sy afovoan'i Orange County. Ny zava-maniry dia eo am-panitarana fanitarana iray hafa ankehitriny, izay antenaina hitondra fahaizana hatramin'ny 130 tapitrisa galona isan'andro amin'ny 2023.
Raha ity rafitra ity dia natsangana voalohany indrindra hahazoana rano madio ho an'ny fampiantranoana sy ny fampiasana orinasa ary tsy natomboka noho ny fiahiahiana ny fiantraikan'ny famoahana rano maloto any anaty ranomasina, hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2008, dia namorona 329 miliara litatra ny rano madio voaverina. Ny ampahany lehibe amin'io rano io dia azo inoana fa natsipy tany an-dranomasina raha tsy namboarina sy nampiharina ilay rafitra.
Ny rafitra dia mbola mamorona riandrano fako. Ny dingan'ny fanadiovana dia miteraka rano madio 85 isan-jato amin'ny habetsany, fa ny 15 isan-jato kosa dia alefa any amin'ny OCSD mba hikarakarana bebe kokoa. Amin'ity fotoana ity dia toa dite mangatsiaka mainty izy io. Ny solo-javatra dia sarahina ary entina mameno tany. Ny sisa tavela dia mbola alefa any anaty ranomasina amin'ny alàlan'ny fantsom-pivoahana, izay mitondra ny rano dimy kilaometatra mankany anaty ranomasina amin'ny halalin'ny roanjato metatra ambanin'ny rano.
OCSD koa dia mijinja metana sy hidrogen. Ny hidrogen dia ampiasaina amin'ny fiara hidrôzenina, ary misy tobin-tsolika eo am-bavahady voalohany.
Ny GWRS dia nanjary maodely ho an'ny toerana hafa, naneho fa ny rano fanodinana dia afaka miasa ary ho eken'ny besinimaro ho vahaolana amin'ny rano maloto any amin'ny faritra malalaky ny renivohitra. Ny distrika dia niara-niasa tamin'i Singapore, izay nanamboatra ary ankehitriny mampiasa zavamaniry kely kely telo farafaharatsiny mampiasa teknolojia mitovy amin'izany, ary tanàna marobe manerana an'i California, Etazonia ary izao tontolo izao no mandinika raha mety miasa ho azy ireo ny fanarenana rano maloto.
Ny mineraly dia ampidirina ao anaty rano voadio mba hiaro azy ary hampiorina ny pH, alohan'ny hidirana amin'ny rafitra fizarana. Sary © Distrikan'ny rano County Orange
Tsy afaka mijanona mihitsy ny fanentanana ampahibemaso, ary tokony ho aloha sy matetika. Ny Orange County dia nianatra tamin'ny tsy fahombiazana tany San Diego tamin'ny 1994, ary tany Los Angeles tamin'ny 2000, izay samy nanandrana nampita fandaharana fanodinana rano ary tsy nahomby. Tany LA, nandray andraikitra ny fahatsapana ny rariny ara-tsosialy, satria faritra mahantra kokoa no namboarina handray ny rano voaverina. San Diego dia nanangana orinasa desalinization ranomasina (lafo vidy, mahery vaika).
Ny OCWD dia nanambola tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo sekoly mba hampandraisana anjara ankizy, ao anatin'izany ny fetiben'ny rano isan-taona ho an'ny kilasy faha-5 sy faha-6 sy kilasy natokana ho an'ny tanora lehibe, nampianarina tamin'ny alàlan'ny oniversite eo an-toerana; ny Distrika dia manome fitsidihana maimaimpoana ny zavamaniry ho an'ny besinimaro; ny tranonkala dia be pitsiny, miaraka amin'ny fanazavana sy horonan-tsary notsorina, ary koa ny tranombokim-baovao misy tatitra lalindalina kokoa.
Ny GWRS dia noraisina tsara. Amin'ireo lahatsoratra 158 momba ny hetsika navoaka an-gazety dia teo anelanelan'ny 2000-2016, tsy nisy fandrakofana ratsy aotra, ary ny ankamaroan'ny lahatsoratra dia heverina ho tsy miandany (72%) na tsara (28%).
Ny fampianarana ireo mpiasa izay mitantana ny zavamaniry hiresaka ampahibemaso momba ny asany tsy misy fitenenana, ary ny fanaovana azy ireo hanao ny torolàlana sy ny fampisehoana, fa tsy ny orinasa PR, dia nahomby. Vao haingana i California no namoaka lalàna iray mamela ny fotodrafitrasa hanodina ampahany kely amin'ny rano vokarina ao, izay midika fa ny mpiasa dia afaka mitondra ny rano amin'ny fetibe sy foara eo amin'ny fiaraha-monina mba hahitan'ny olona fa madio ny rano. Ny tahotra hisotro rano fanodinana dia mihena miaraka amin'ny mahazatra.
Ny fananana aquifer iray ahafahana mamerina mamoaka ny rano dia manome tombony ara-psikolojika amin'ny fanesorana ny fanilikilihana ampahibemaso. Izy io koa dia manome fiarovana fanampiny fiarovana amin'ny fiantohana ireo rano voaangona amin'ny rano ambanin'ny tany.
Ny fanatsarana ny teknolojia membrane dia nampihena ny vidin'ny angovo an'ny osmosis miverimberina hatramin'ny 75% hatramin'ny taona 1970.
Matetika ny olona manontany hoe maninona no tsy manala ny rano ranomasina ny distrika. Sarotra kokoa ary lafo kokoa ny manadio rano sira noho ny manadio ny maloto. Ny ranomasimbe dia misy sira manodidina ny 35,000 ppm, raha latsaky ny 2000 ppm kosa ny rano maloto.
Izy io dia asa goavana ara-bola, miaraka amin'ny vola mitentina $ 1 miliara, ary ny tombana amin'ny fanaovana programa mitovy amin'izany ankehitriny dia manakaiky ny $ 2 miliara.
Rehefa mandeha ny fotoana, nodiovina ny fitsipika satria niditra ny angona avy amin'ny fotodrafitrasa toa ny GWRS. Raha vao nanomboka ny programa dia nitaky ny hametrahana ny rano ao ambanin'ny tany mandritra ny enim-bolana ny fizarana rano fisotro any California, izay namorona fanamby amin'ny fotodrafitrasa sy ny injeniera. Ankehitriny, ny fotoana fitahirizana ambanin'ny tany dia nihena ho telo volana.
Ny salanisan'ny vidin'ny fananganana GWRS dia $ 1 lavitrisa $ (973 tapitrisa $, miaraka amin'ny vidin'ny $ 481 tapitrisa ho an'ny galona 70 tapitrisa isan'andro). Io dia naloan'ny $ 135 tapitrisa amin'ny trosa federaly zanabola ambany ary $ 167 tapitrisa amin'ny trosan'ny fanjakana zanabola, miaraka amin'ny famatsiam-bola manefa ny fahasamihafana, ao anatin'izany ny $ 90 tapitrisa dolara amin'ny fanampiana avy amin'ny masoivoho, ao anatin'izany ny Departemantan'ny Rano misahana ny rano ao California, ny fiarovana ny tontolo iainana. Agency, Distrikan'ny rano Metropolitan any atsimon'i California, sy ny hafa.
Ny fanafarana rano avy any an-kafa dia mitentina $ 1,000 isaky ny iray hektara; fa ny sandan'ny rano novokarina tao amin'ny GWRS dia $ 525 isaky ny acre-foot miaraka amin'ny famatsiam-bola, na $ 850 isaky ny acre-foot tsy misy fanampiana.
Distrika fanadiovana Orange County sy distrikan'ny rano County County Orange
CDM Smith (injeniera)
Black and Veatch (injeniera)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandraisana an-gazety ny fanodinana rano azo sotroina ao amin'ny rafitra fanarenana rano anaty rano ao amin'ny County County Orange
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDistrika fanadiovana Orange County
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDistrikan'ny rano County Orange
Video: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFizahan-tany virtoaly: Rafitra fanarenana rano ambanin'ny tany
Azo zahana amin'ny fiteny efatra izao: Fandraisana an-davitra & fanaovana sarintany lavitra momba ny fiarovana an-tsambo ny haran-dranomasina